Kubva pamunhu kuita Yakakwira-Tsananguro Emotional Intelligence | Martech Zone
Vanhu vane yakakwirira kunzwisisa kwepfungwa (EQ) inofarirwa kwazvo, inoratidza kushanda kwakasimba uye kazhinji inobudirira. Ivo vane simba uye vane hunyanzvi hwehukama: vanoratidza kuziva kwemanzwiro evamwe uye vanoratidza kuziva uku mumashoko nezviito zvavo. Ivo vanokwanisa kuwana chavanowirirana nevanhu vakasiyana siyana uye nekurera hukama hunopfuura kupfuura hushamwari uye kugona kuwirirana.
Ivo vanozviita izvi nekucherechedza nekuongorora zvisingaoneki nuances: manenji, manzwi ezwi, sarudzo yeshoko, kumeso - zvakataurwa uye zvinongedzwa macode anotenderera pakati pevanhu - uye kugadzirisa maitiro avo nenzira. Dare rinotonga richiri kunze kweiyo quintessential quantification nzira yeEQ, asi isu hatidi bvunzo: isu tinoziva vanhu vane yakakwira EQ sevateereri vakanaka, ivo vanorera matiri manzwiro ekuti tinonzwisiswa, uye ndiani anoita kwatiri pasina musono.
Mukutsvaga kwake kweEQ, chiremba wepfungwa Daniel Kahneman weNobel Prize mukurumbira akawanikwa kuti vanhu vanosarudza kuita bhizinesi nemunhu wavanoda uye wavanovimba naye pane kuita munhu wavasingazive, kunyangwe kana munhu iyeye ari kupa chigadzirwa chiri nani nemutengo wakaderera.
Fungidzira kana mabrandi aigona kudaro!
Vanhu Vari Kuseri kweData
Chinangwa chekushambadzira ndechekuziva uye kunzwisisa mutengi zvakanyatsonaka zvekuti chigadzirwa kana sevhisi zvinomukwanira uye kuzvitengesa pachako. Management guru Peter Drucker (kumashure muna 1974!)
Nheyo yepakati yekushambadzira ndeyekuti kuziva mutengi zvirinani kunobatsira iwe kupa zvigadzirwa nemasevhisi avanonyatsoda. Kunzwisisa mamiriro emutengi kwagara kuri chikamu cheizvozvo, asi munguva pfupi yapfuura huwandu hweruzivo rwezvinhu zviripo kune vatengesi hwave nedenga-roketi.
Kuzvifananidza idanho rekutanga - isu tinoziva izvozvo nekuti maemail anozvimisikidza iye zvino anoshandisa zita redu rekutanga kazhinji kupfuura vabereki vedu. Iko kugona kufonera vatengi nemazita uye kuratidza mamiriro ekunze-akakodzera zvipfeko, semuenzaniso, kutanga kwakanaka kwekugadzira kubatana.
Asi kana iwe uchikwanisa kutarisa pikicha yevatengi vako vese paTV skrini, kuita kwako kunounza zvakashata zvakashata, yakaderera dudziro pikicha, yakapetwa kuita mapfumbamwe kana gumi nemaviri pixels. Iwe waizonangisa pikisheni yegirini zvakasiyana neiyo yeyero, asi izvo zviri pamusoro pehuwandu hwesiyano iwe hwaunogona kuteedzera vatengi vako kuita.
Kana iwe uchiri kuona vatengi vako kuburikidza neiyo pixelated paradigm, urikushayikwa painotevera wave mukushandurwa kwevatengi, uchipa masimba mabhenji kuti ave anoteerera kune vatengi vavo uye kuratidza hungwaru hwepamoyo nehunhu munzira yavanotaurirana nayo.
Iyo kiyi yekuzadzisa dudziro yepamusoro iri mune iyo data. Yako data yevatengi ndeye tekinoroji yakaenzana nemasaini, matauriro, zvemukati uye zvirevo zvinoonekwa nevanhu vane pfungwa. Vatengi vako 'affinities, zvavanoda, zvido uye kuzeza zvese zvakanyorwa mune iyo data. Asi kuti ugadzire kutaurirana kwakangwara kwevatengi nevatengi vako, iwe unoda tekinoroji ino dudzira iro data kuita maitiro ehunhu.
Chengetedza Nhaka Yako Yakakura Zvikuru
Kucheka-kumucheto vatengi kushambadzira matekinoroji ane kugona kuendesa inowedzera granular uye yakatsanangurwa pikicha yevatengi vako. Sezvo algorithms uye data analytics kuwedzera kuve akaomesesa, iwo mapikisheni paTV yako screen anoenderera zvishoma nezvishoma. Pakarepo unoona kuti iyo pixel yebhuruu haisi yebhuruu zvachose - mapikisheni mana: girini, grey, shava uye bhuru-bhuru.
Iye zvino unogona kunongedza zvinowedzera kutsanangurwa mapoka evatengi, rimwe nerimwe riine meseji, zvemukati kana zvekupa zvinoenderana nezvavanoda, nzvimbo murwendo rwevatengi, yekubata uye mamiriro epfungwa. Uye apo tekinoroji painoramba ichiunganidza uye kuumbiridza data, mufananidzo wevatengi vako unozopedzisira waratidzwa mukubwinya kwaro kwakanyatsotsanangurwa.
Uku kutaurirana zvine hungwaru kunopa mabhizinesi akabudirira muganhu pamusoro pemakwikwi nekuhwina pamusoro pemwoyo yevatengi nekuvabatsira kuchengeta pfuma hombe yavanayo - yavo yevatengi.
Tags: kunzwisisa kwepfungwaPersonalizationtarisa